Moscow restaurants and bars now require proof of COVID-19 vaccination | Russia
Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Russia » Restaurantslọ oriri na ọ restaurantsụ Moscowụ na Moscow na-achọ ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19
Restaurantslọ oriri na ọ restaurantsụ Moscowụ na Moscow na-achọ ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19
Ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 ugbu a chọrọ ịga ụlọ oriri na ọ restaurantsụ Moscowụ na Moscow
Naanị ndị nwere akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ihe akaebe na ha nwere coronavirus n'ime ọnwa isii gara aga, ma ọ bụ nyocha PCR na-adịghị mma n'ime ụbọchị atọ gara aga ga-enye akwụkwọ dijitalụ.
A choro ka ndi bi n'obodo ugbua nyochaa QR code tupu ha abanye ebe ile obia.
Site na June 28, sistemụ a ga - abụ "iwu maka ụlọ oriri na ọesụ allụ niile na ụlọ ahịa ka chọrọ ịga n'ihu na - arụ ọrụ ọfụma."
Ndị a gbara otu ọgwụ ogwu a ga-etokwa tozuru etozu a.
A na-ekwuwapụta mgbochi mgbochi ọhụrụ COVID-19 n'isi obodo Russia maka ndị na-anatabeghị coronavirus jab ma ọ bụ ndị bu nje a.
Moscow Onye isi obodo bụ Sergey Sobyanin kwupụtara ọkwa mgbochi mgbochi COVID taa nke ga-achọ ka ndị bi n'obodo ahụ nyochaa QR code tupu ha abanye ebe obibi ọbịa gụnyere nri nri, ụlọ nri, ụlọ mmanya na ebe ndị ọzọ.
Naanị ndị nwere akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ihe akaebe na ha nwere coronavirus n'ime ọnwa isii gara aga, ma ọ bụ nyocha PCR na-adịghị mma n'ime ụbọchị atọ gara aga ga-enye akwụkwọ dijitalụ. Ndị a gbara otu ọgwụ ogwu a ga-etokwa tozuru etozu a.
"Ọnọdụ na mgbasa nke Covid ka siri ike," onye isi obodo ahụ kwuru. “E nwere ihe karịrị mmadụ 14,000 na-arịasi ọrịa ike n’ụlọ ọgwụ. A na-achịkọta usoro nlekọta ahụ ike. ”
Site na June 28, sistemụ a ga - abụ "iwu maka ụlọ oriri na ọesụ allụ niile na ụlọ ahịa ka chọrọ ịga n'ihu na - arụ ọrụ ọfụma." Nri nri na nnyefe ga-abụ naanị nhọrọ dịịrị ndị na-enweghị koodu QR. Abụọ nde mmadụ nọ na obodo kachasị na Europe enwetaworị ọgwụ mbụ ha.
Obodo ahụ amachibidola ndụ abalị, na-egbochi izu abụọ na ụlọ mmanya na klọb na-elekọta ndị na-elekọta ndị ahịa n'elekere 11 nke abalị.
N'otu oge ahụ, emechibidoro iwu gara aga na-egbochi ihe omume uka, na-egbochi ebe ịnwe ihe karịrị ndị ahịa 500 na saịtị n'oge ọ bụla.
N’izu gara aga, Moscow ghọrọ obodo izizi n’ụwa mere ka ịgba ọgwụ mgbochi bụrụ iwu maka ndị nọ n’ihu ọha. Ulo oru di iche-iche dika ile obia, iga njem na ihe nlere kwesiri igosi na 60% nke ndi oru ha anatala jab ma obu ndi ozo gha eche iru oru. Ndị ọchịchị ekwenyela na ụlọ ọrụ nwere ike ịkwụsị ndị ọrụ na-enweghị akwụ ụgwọ iji nweta ego ha. E tinyela iwu yiri nke ahụ na St. Petersburg na mpaghara ndị ọzọ Russia.
N’ụbọchị taa, onye ọka iwu na-ahụ maka ihe ruuru mmadụ na Russia Tatiana Moskalkova kpọrọ njem ahụ “egwuregwu na-anaghị akwụwa aka ọtọ.” O kwuru na "usoro a na-esi etinye ya na-ebute oke ọgụgụ isi na-eme ka ndị mmadụ na-atụ ụjọ mmanye."
Onye isi ala Duterte: Ọ bụrụ na ịchọghị ịgba ọgwụ mgbochi, gaa n'ụlọ mkpọrọ ma ọ bụ hapụ Philippines!
Data ọhụrụ na Tumor ụbụrụ ụmụaka
Queen Elisabeth 2 bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ Accor ugbu a
Ihe omuma ohuru banyere Alzheimer na Parkinson...
Ọtụtụ ụmụ Israel ọhụrụ Ukraine: Chaị!
Njem nlegharị anya Malaysia ebidola ihe ngosi okporo ụzọ na India
A na-amata endometriosis dị ka ọrịa sistemu